Senator Muuse Suudi oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka Cadale – Kalfadhi
Senator Muuse Suudi oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka Cadale
Senator Muuse Suudi Yalaxow oo katirsan Xubnaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dagaal ay dad badan ku dhintayn kaas oo ka dhacay degaanka Burdheere ee degmada Cadalle kaas oo dhaxmaray Ciidamo Maleeshiyo ah oo halkaasi muddo isu horfadhiyay.
Senator Muuse Suudi ayaa ku baaqay in dagaalka la joojiyo islamarkaana laga fekero sidii loo heli lahaa xal deg deg ah oo aan dagaalka dib dambe u soo celin Karin, maadaama hore dhowr jeer uu dagaalkaan dhacay.
“Waxaan ugu baaqayaa beelaha walaalaha ah ee degaalamaya in ay rasaasta joojiyaan, dagaal Wiil kuma dhasho ee Wiil-baa ku dhinta”, ayuu yiri Senator Muuse Suudi Yalaxow oo katirsan Aqalka Sare.
“Muddo badan ayuu soo noq noqday dagaalkaan, habka loo xalinayo waxaan ku baaqayaa in ay noqoto wado aan dib dambe dagaalka u soo celin Karin” ayuu yiri Muuse Suudi oo katirsan Senatorada matala mid kamid ah beelaha halkaasi ku dagaalamaya ee Gobalka Shabeelaha dhexe.
Muuse Suudi Yalaxow ayaa sheegay in dagaalka lagu dhamaaday dad badanna ay ku dhintayn sidoo kalane dhaawacyo badan uu ka dhashay waxa uuna ku taliyay in dhinacyada dagaalamaya odayaashooda dhaqanka ay ku baxaan dagaalka sidii loo dhamayn lahaa, sidoo kale Maamulka Gobalka ayuu ka dalbaday in dagaalka aagga uu ka socda ay geeyaan Ciidamo katirsan Dowladda Soomaaliya oo kala dhaxgala dhinacyada is horfadhiya.
“Meeshaas waa lagu dhamaaday, dhimasho badan iyo dhaawac badan ayaa ka dhahsay, dad badan ayaa lagu waayay waxaana codsanayaa in dagaalka la joojiyo”, ayuu hadalkiisa raaciyay Xildhibaan Muuse Suudi Yalaxow oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka oo si kulul uga hadlay dagaalka Xeraale
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland oo dib ugu noqday Garowe xili la filayo in ay dib u bilawdaan hawlaha kalfadhiga 43aad